Apple inotangisa yechina beta yeIOS 9.3.3, tvOS 9.2.2 uye OS X 10.11.6 | IPhone nhau
Zvakanaka, izvi zvave zvichishamisa: Apple yatanga masikati ano (kuSpain) iyo yechina beta yeIOS 9.3.3, tvOS 9.2.2 uye OS X 10.11.6. Ini ndinoti zvanga zvichishamisa nekuti anga ave anopfuura vhiki mbiri kubvira pavatanga iyo yekutanga beta yeIOS 10, yechitatu beta yemhando dzepedyo dzakatangwa musi wa21 uye aya mabheji anosvika mazuva masere chete mushure meiyo yapfuura vhezheni.
Zvese zviri zviviri beta yeIOS 9.3.3 uye OS X 10.11.6 zviripo yevanogadzira uye vasiri-vagadziri. Semazuva ese, izvi hazvisizvo neTVOS 9.2.2. Isu tinorangarira kuti kuisa tvOS betas hakusi nyore seIOS uye OS X betas (inozotumidzwazve kuti macOS kubva muna Gumiguru), inoda kuti mugadziri atipe ruoko kana tichida kuiisa. IOS uye OS X betas zvava kuwanikwa kuburikidza neOTA uye kubva kuApple Developer Center.
Iko kune beta nyowani yezvinenge zvese: iyo watchOS imwe inoshaikwa
Sezvatinogara tichitaura, hatikurudzire kuisirwa yeiyi kana chero imwe software muchikamu chekuyedza nekuti zvinowanzoitika kuti mushure mekuiisa tinosangana nematambudziko asingatarisirwe. Uye zvakare, hapana imwe yedzidziso nyowani ichasanganisira inoshamisa nhau; ivo vachasunungurwa kunatsiridza kuvimbika, kugadzikana uye chengetedzo yehurongwa, saka haina kukodzera njodzi.
Iyo watOS beta ichavhurawo nezvidiki zvigadziriso kana nguva yasvika, asi nhasi kwave pasina beta nyowani yewatchOS 2.2.2. Kubva pakuonekwa kwayo, Apple iri kuitora nyore pane inoshanda system yeiyo smartwatch, kana zvirinani kune vhezheni 2.x. watchOS 3.0 ichasanganisira inonakidza nyaya zvekuti vashandisi vazhinji vanoti ndiyo yakanakisa yavakapa kune yekupedzisira WWDC.
Ehezve, neizvo zvataurwa pamusoro apa, kana iwe ukafunga kuisa imwe yeiyo itsva betas, usazeze kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Apple inoburitsa yechina beta yeIOS 9.3.3, tvOS 9.2.2 uye OS X 10.11.6